Nchịkọta atụmatụ maka atụmatụ weebụsaịtị: 67 Ultimate Must-Haves for Your Site | Martech Zone
Chaị. M hụrụ ya n'anya mgbe mmadụ na-echepụta ndepụta nyocha na infographic nke dị mfe ma na-ezi ozi. UK Web Host Review haziri ihe omuma a iji meputa ndepụta nke ihe ha kwenyere na ha kwesiri itinye ya na ahia obula.
Maka azụmahịa gị iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịntanetị ịkwesịrị ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị jupụtara na ya! Enwere ọtụtụ obere nkọwa nke nwere ike ime ihe dị iche - ma na inye ndị ahịa ntụkwasị obi na inye ha ọrụ ndị ọzọ na-enyere aka ịgbanwe ma melite ahụmịhe onye ọrụ nke saịtị gị. Ọ na - eme ka azụmahịa gị dị iche na nke ọzọ na - enye gị asọmpi.
Ndepụta a bụ maka azụmahịa ọ bụla na saịtị e-commerce kwesịrị ile anya. Agbakwunyere m ihe ole na ole na mgbakwunye na ndepụta ha ị kwesịrị ịgụnye!
Na mkpokọta, ọ dị oke mkpa na webụsaịtị gị na-ezute ebumnuche ị na-etinye - ịchụ ahịa. Nke ahụ pụtara na onye ọbịa ọ bụla kwesịrị iji ebumnuche, chọta ozi ha chọrọ, duga ya na ntụgharị, ma nye gị ọkwa dị mkpa na ịkọ akụkọ ịkwesịrị iji bulie saịtị ahụ nke ọma.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na imewe. Nhazi mara mma na-enye mmetụta ozugbo ịchọrọ ka ndị ọbịa nwee, mana belụsọ na saịtị ahụ na-arụ ọrụ ma na-anya ahịa maka ụlọ ọrụ gị, ọ gaghị aba uru itinye ego. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ anaghị enyekarị atụmatụ gị niile ka saịtị gị nwee ọganiihu. Ntughari, nyocha, na njikarịcha mmekọrịta mmadụ ekwesịghị ịbụ mgbakwunye, ha kwesịrị ịbụ ntọala maka ọrụ weebụsaịtị ọ bụla.
Na Ibe akwukwo gi:
ngalaba aha - nke ahụ dị mfe ịgụ ma cheta. Mgbakwunye ngalaba .com ka bụ nke dị adị ebe ọ bụ na nke ahụ bụ ihe nchọgharị ga-esi edozi ma ọ bụrụ na pịnye ngalaba ahụ na-enweghị ndọtị. Ihe ndọtị ngalaba ọhụụ na-anakwere (eg .zone ebe a!) Yabụ echegbula onwe gị… oge ụfọdụ ngalaba dị mkpụmkpụ na ndọtị ọzọ nwere ike ịbụ ihe ngwọta echefu echefu karịa ngalaba .com ogologo na-enweghị isi ma ọ bụ chọrọ dashes na okwu ndi ozo. Ọ ga - eju gị anya etu ị ga - esi nweta azụmaahịa ngalaba, kwa. Akwụsịla ọchụchọ gị na ndebanye aha ọhụrụ.
Logo - onye nnọchiteanya ọkachamara nke azụmahịa gị nke pụrụ iche. Logo imewe bụ artform iring chọrọ iche, ude ọ bụla nke, okike, agba nke na-ele ndị na-ege gị ntị anya, na ikekwe izipu ozi ọhụụ nke metụtara ndị na-ege gị ntị. Jide n'aka na ijikọ akara ngosi gị na azụ n'ụlọ obibi gị ka ejiri ọtụtụ ndị ọbịa mee ihe.
TagLine - nkọwa di nkenke nke ahia gi. Nke a ekwesịghị ịbụ njirimara ọ gwụla ma ị bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ otu aghụghọ. Lekwasị anya na uru nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ọ bụghị atụmatụ ahụ. Bee griiz zuru oke maka Dawn. Ma ndepụta nke mmejuputa iwu na njikọta kama Ghọta nloghachi gị na ntinye ego na teknụzụ ka mma karie Highbridge.
Nọmba ekwentị - a pịa na trackable akara ekwentị (ma hụ na ị zara). Ndepụta nọmba ekwentị ga-enyere gị aka ịkọwapụta mkpọsa na etu atụmanya si erute gị. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-abụkarị mkpanaka, ịhụ na nọmba ekwentị ọ bụla bụ njikọ dị mfe dị mkpa essential ugbu a, onye chọrọ ịnwale ma detuo ma mado nọmba ekwentị site na ekwentị mkpanaaka.
Kpọọ-na-Action - gwa ndị ọbịa ihe ị ga - achọ ka ha mee ọzọ ma ha mee ya. Ibe obula nke saiti gi kwesiri inwe CTA. Aga m akwadoro ịnwe Kpọọ ka ị rụọ ọrụ bọtịnụ dị n'elu aka nri nke usoro ụzọ gị. Mee ka ọ dị mfe, gwa ndị ọbịa ihe ọzọ ha ga-eme, ma nyere aka mee njem ndị ahịa.
Top Navigation - nhọrọ ezi uche ịchọta peeji ndị dị na saịtị gị. Mega menu nwere ike ịdị mma, mana belụsọ ma emebere ha nke ọma, ọtụtụ nhọrọ nwere ike ịba ndị na-ege gị ntị oke. Ahụla m aka na nleta peeji nke rutere na saịtị ebe anyị belatara ihe nchọgharị na ntakịrị akụkụ nke ihe ha bụ.
Bread Crumb Navigation - nyere ndị ọbịa gị aka ịnyagharịa nke ọma. Inye mmadụ ụzọ isi bulie elu elu dị oke mma. Achịcha achịcha bụkwa nnukwu ngwaọrụ njikarịcha ọchụchọ, na-enye engines ọchụchọ iji nweta nghọta ka mma maka ndị isi saịtị gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ saịtị ecommerce nwere ọtụtụ edemede na ngwaahịa SKUs.
N'elu ogige atụrụ:
Vidiyo, Foto ma ọ bụ ihe mmịfe - ihu anya gosiputa ihe erere ahia na iche iche. Nwere ike ịchọrọ itinye akwụkwọ igbe ọkụ. Mgbe ị nwere eserese ma ọ bụ onyonyo nke nwere nkọwa ị ga - achọ ka ndị ọbịa nyochaa, na - eme ka ihe oyiyi pịa ebe oyiyi, gallery, ma ọ bụ mmịfe na - agbasawanye na ezigbo ụlọ achọrọ bụ ezigbo ahụmịhe ndị ọrụ.
Nyocha na akaebe - Social àmà dị oké mkpa. Ọtụtụ ndị na-achọ ịbịa leta gị chọrọ ịghọta ihe abụọ dị ezigbo mkpa… you nwere ike ime ihe ị gwara gị mee? Olee ihe akaebe na-egosi na ị ruru eru? Ihe omuma ederede di nma, vidio di nma karie. Ọ bụrụ na ị ga-eji ederede, gbaa mbọ tinye foto onye ahụ yana aha ha, aha ha na ebe ha nọ (ọ bụrụ na ọdabara).
Ozi azụmahịa dị mkpa - Ọnọdụ ọnọdụ gị na adreesị nzipu ozi zuru oke iji tinye na ntọala saịtị gị. Ọ bụrụ na ọnọdụ anụ ahụ gị dị oke mkpa maka azụmahịa gị, ị nwere ike ịchọrọ itinye ya na aha njirimara gị, ma ọ bụ nye maapụ niile na saịtị ahụ maka ndị mmadụ iji chọta gị. Ihe dịkwa mkpa bụ awa nke ozi na ụzọ kachasị mma iji kpọtụrụ gị.
N'okpuru N'ogige atụrụ:
N'ezie, na ihuenyo nke oge a… ogige ahụ dị iche maka ngwaọrụ ọ bụla. Agbanyeghị, maka ọtụtụ akụkụ, ọ bụ mpaghara ihuenyo anaghị ahụ anya ozugbo mmadụ mepee ibe gị na ihe nchọgharị. Atụla egwu nke ibe dị ogologo… n'eziokwu, anyị anwalela ma hụ ogologo oge, peeji ndị a haziri nke ọma na-arụ nke ọma karịa ime ka ndị ọbịa pịa iji nweta ozi ha chọrọ.
Ọdịnaya dị mma - nkwupụta ahịa gị pụrụ iche nke akọwapụtara maka ndị ọbịa na ọchụchọ.
Main Atụmatụ - nke ngwaahịa na ọrụ gị.
Njikọ Esịtidem - gaa na ibe weebụ gị.
Ibe edokwubara - Njikọ n'ime ọdịnaya peeji iji nyere ndị ọrụ aka ịrị elu ma ọ bụ gbadata ibe iji chọta ozi ha na-achọ.
navigation - Secondary igodo na-emekarị peeji. Tebụl nke ndeksi na-adịkarị ukwuu na ibe edokọbara iji nyere onye ọbịa aka ịwụfu site na otu ngalaba gaa na nke ọzọ.
Social Media - nyere ndị mmadụ aka ịmata gị site na ọwa mmekọrịta.
Nkata Ntaneti Online - mkparịta ụka ozugbo mgbe onye ọbịa bịara nyocha. Ndị na-akparịta ụka na-aghọ ngwaọrụ dị ịtụnanya iji tozuo ma jupụta arịrịọ site na nkata n'ụzọ ziri ezi ma dịkwa mma. E nwekwara ndị na-anabata ndị ọzọ oge niile ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iji nyochaa nkata gị n'oge na n'azụ oge azụmahịa.
Oge Azụmaahịa - yana ọnọdụ gị, nke a ga-eme ka ndị ọbịa mara mgbe ha nwere ike ịga. A pụkwara itinye oge azụmahịa na metadata saịtị gị maka engines ọchụchọ, akwụkwọ ndekọ aha, na ọrụ ndị ọzọ na-awagharị na saịtị gị.
Ozi mkpọtụrụ - adreesị anụ ahụ na nzipu ozi (es), akara ekwentị, na / ma ọ bụ adreesị ozi-e. Kpachara anya na-ekwusara adreesị ozi-e. Crawlers na-eburu ha mgbe niile ma ị nwere ike ịmalite inweta spam ọtụtụ.
N'ime peeji ndị:
gbasara Anyị Ọdịnaya - kedu akụkọ gị?
Ọdịnaya Peeji Nke - ngwa ahịa na onyinye onyinye n'uju.
Formdị kọntaktị - let ọbịa mara mgbe na-atụ anya a nzaghachi.
Captcha / Anti-Spam Njirimara - ị ga-enwe mwute ma ọ bụrụ na ịmeghị! Bots na-agbagharị na saịtị mgbe niile ma na-enyefe ụdị mgbe ha na-ejighị ya.
Amụma Nzuzo - mee ka ndị ọbịa mara ka ị ga-esi jiri data ị na-anakọta n'aka ha. Nwekwara ike ịchọ Usoro nke Ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-enye ụdị ọrụ ọ bụla na saịtị gị. Bestzọ ị kachasị mma bụ ịgwa onye ọka iwu okwu!
Ajụjụ Peeji - ajuju ajuju banyere ngwa ahia na oru gi.
Peeji buloo - ụlọ ọrụ ozi ọma, ụlọ ọrụ ozi ọma, ndụmọdụ, na ahịa akụkọ ị nwere ike ịkọrọ ndị na-ege gị ntị.
Njirimara okwu - mụbaa njikọ aka onye ọrụ.
Ọchọ nchọta - mee ka ọ dịịrị ndị ọbịa mfe ịchọta ozi ha na-achọ.
sidebar - gosiputa ohuru ma obu ihe kacha ewu ewu na blog, oku na-aga, ma obu ihe ndi ozo.
Egwuregwu Social Media - na - enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta edemede gị n’ụzọ dị mfe.
Ihe ndị ọzọ na ihe e chepụtara iji tụlee:
Mfe ngwa ngwa, ederede dị ọcha - cheta na mkpụrụedemede serif na-eme ka ndị na-agụ ya gụọ ọdịnaya dị mfe. Ọ bụghị ihe ọhụrụ iji mkpụrụ edemede Sans-serif na isi na mkpụrụ edemede maka ọdịnaya ọdịnaya.
Njikọ ndị dị mfe nghọta - agba, gosi, ma ọ bụ bọtịnụ ga-eduga ndị ọrụ ịpị ma ghara inwe nkụda mmụọ.
Mobile anabata - imepụta saịtị nke oge a nke na-adị mma na ngwa mkpanaka kwesịrị!
Hamburger menu na saịtị ntanetị
Jiri agba dị iche
Jiri nyocha anwansi - anyị hụrụ n'anya Grammarly!
Njikwa Nchọgharị Search:
Mbụ na meta nkọwa mmelite - ebuli aha gi na meta meta ya mere ndi oru nyocha ichoro karia ibanye.
Ihe e kere eke akpaghị aka - na ntinye onwe ha na ngwa oru webmaster.
Ọ dị mfe iji melite usoro URL - URL dị mkpirikpi, dị mkpirikpi nke na-ejighi querystrings na ọnụọgụ dị mfe ịkekọrịta ma mara mma ịpị.
Sava na Bochum:
Bochum ngwa ngwa na ntụkwasị obi - anyị hụrụ n'anya Flywheel!
Akpaka mkpokọta ndabere atụmatụ - saịtị gị kwesịrị ịkwado kwa abalị ma dị mfe iji weghachi. Kasị ezigbo nhazi nyiwe na-enye nke a.
SSL / HTTPS - hụ na saịtị gị nwere akwụkwọ nchekwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnakọta ozi sitere na ndị ọbịa. Nke a bụ ihe a chọrọ n’oge dịka ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ ga - ezere ihe ọ bụla mana ọdịnaya echekwara.
Nka na ụzụ chọrọ Backend:
Jiri CMS - ọ gaghị ekwe omume ịsọmpi na sistemụ njikwa ọdịnaya taa iji tinye ngwaọrụ niile, njikọta, yana arụmọrụ site na ịnwa ịde ngwanrọ weebụ gị. Chọọ maka CMS nwere nnukwu ikike SEO ma mejuputa ya ozugbo.
Kachasị koodu maka ngwa ngwa peeji nke loading - Sistemụ CMS nke oge a na-etinye nchekwa data iji chekwaa ọdịnaya yana ibe weebụ iji jụọ ma gosipụta ya. Nnukwu koodu dị mgbagwoju anya nwere ike itinye nnukwu ọrụ na sava weebụ gị (ọkachasị mgbe ndị ọbịa n'otu oge na-akụ saịtị gị), yabụ koodu edere nke ọma ga-adịrịrị!
Ndakọrịta ihe nchọgharị
Mkpokọta Njikọ Google Search
Nchịkọta nchịkọta Google - Ọbụna nke ka mma nwere ike ịbụ nchịkọta Google Tag Manager na njikwa Google Analytics.
Microformats - Ntuziaka Schema.org maka Google ka ị gụọ (ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa mpaghara), data Twittercard maka twitter, na ịkpado OpenGraph maka Facebook niile nwere ike ime ka ọhụhụ gị dịkwuo mma mgbe ekesara ma ọ bụ chọta saịtị gị na nyocha na mgbasa ozi mmekọrịta.
Mkpakọ mgbasa ozi - jiri ihe ọrụ mkpakọ image iji mee ka onyonyo gị dị ngwa n’enweghị emebi ihe onyonyo ndị ahụ.
Obi umunya - Oyiyi, odiyo, na vidiyo ekwesighi ịpinye ozugbo na ibe weebụ ruo mgbe elere ha, lee ha, ma ọ bụ gee ha ntị. Jiri umengwụ loading technology (wuru n'ime WordPress) iji gosipụta peeji gị na mbụ… wee gosipụta usoro mgbasa ozi mgbe ọ dị mkpa.
Ebe Caching - mgbe a napụtara saịtị gị, ọ nwere ike ịdị ngwa ngwa. Ma olee maka mgbe ị nwere iri puku kwuru iri puku ndị ọbịa n'otu ụbọchị… ọ ga-adaba ma ọ bụ jigide?
Jiri ọrụ nnabata vidiyo, ebukwala vidiyo na sava gị
Zere egwu dị n'okirikiri
Zere Pịa iji tinye saịtị (belụsọ na enwere mgbochi afọ)
Ezula ọdịnaya, onyonyo, ma ọ bụ akụ ndị ọzọ
Ekekọrịtala ozi nzuzo
Ihe ndi ozo Agbaghara
Akwụkwọ Akụkọ - Ọtụtụ ndị ọbịa na saịtị gị agaghị adị njikere ịzụta mana ha ga-edebanye aha ịzụta mgbe e mesịrị ma ọ bụ na-akpọtụrụ. Njide email bụ ihe dị oke egwu maka azụmahịa ọ bụla!
CDN Netwọk Nzipu Afọ ga-eme ngwa ngwa na saịtị gị nke ọma.
Ugbokodo.txt - Mee ka ụlọ ọrụ ọchụchọ mara ihe ha nwere ike na enweghị ike ịdepụta, yana ebe ịchọta saịtị saịtị gị. Gụọ: Kedu ihe njikarịcha Nchọgharị Nchọpụta?
Ibe akwukwo - Ibe akwukwo bụ ihe kwesịrị inwe. Ibe njedebe maka onye ọ bụla nwere mkpali onye ọbịa nke pịrị apị na-eme ihe dị oke mkpa maka mmeri gị. Na peeji nke ọdịda nke jikọtara na njikwa mmekọrịta ndị ahịa na nyiwe akpaaka azụmaahịa ka mma. Gụọ: 9 Mmehie Peeji Ndozi Iji Zere
Podcasts - Podcasting na-aga n'ihu na-ebute nsonaazụ na azụmaahịa. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịdabere na ndu maka ajụjụ ọnụ, weghaara akaebe sitere n'aka ndị ahịa, kụziere ndị ahịa ha ihe ma wulite ikike na ụlọ ọrụ ha. Gụọ: Ihe kpatara ụlọ ọrụ ji na-agbasa ozi
Videos - Ọbụna obere ụlọ ọrụ nwere ike imeli vidiyo ndị bụ isi… ihe niile ị chọrọ bụ ama gị na ọ dị mma ịga! Site na vidiyo na-akọwa ihe na akaebe nke ndị ahịa, ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị ọbịa agaghị agụ, mana ha ga-elele vidiyo na saịtị gị niile. Atụla egwu itinye ha n’ime ọdịnaya gị niile. Gụọ: Ihe kpatara vidiyo vidiyo bụ ihe dị mkpa na ụdị 5 nke vidiyo Should Kwesịrị cemịpụta
map - you debanyere aha na ya Google My Business? Ikwesiri ibu nyocha nke map maka ahia gi. Aga m agba gị ume itinye map na saịtị gị.
Akara Ogwe - Ọ bụrụ n’ị bụ ụlọ ọrụ B2B, ịnwe akara ngosi akara ngosi dị oke egwu ka atụmanya wee hụ onye gị na ya na-arụkọ ọrụ. Anyị wuru wijetị ihe oyiyi n'ihi nke a.
Ngwaahịa adịchaghị - Ọ bụrụ na ị naghị ewepụta ọdịnaya dị oke ọnụ dị ka infographics, akwụkwọ ọcha, yana ọmụmụ ihe, ị na-efu ọtụtụ ụzọ iji dọta ndị ọbịa iji jikọọ gị site na peeji nke ọdịda gị! Gụọ: Usoro ahia kachasị elu maka ọgbọ na-eduga
Kpụrụ Ekwentị - Facebook Instant Articles, Apple News, na Google Accelerated Mobile Pages bụ ihe ọhụrụ, agbakwunyere ụkpụrụ ọdịnaya ị kwesịrị ị na-ebipụta. Gụọ: Anyị nọ ugbu a na Apple News
Tags: gbasara anyịbanyere anyị peeji nkeampmgbochi spamegwu dị n’azụblogachịcha obere achichaachịcha crumbsachichaachichaoge azụmahịaozi azụmahịakpọọ ka emeKpọọ bọtịnụ iji mee ihecaptchanyochaikwu okwu spamcommentskọntaktị ụdịctaụkangalaba ahaFAQAjụjụflashGoogle Analyticsgoogle mapgoogle mapgoogle azụmahịa mhamburger menuIhe mmịfe onyonyooyiyinjikọ dị n'imenchọta n'imembido peeji nkelogologo rotatorInfographics AhịaAhịa Podcastmobile menum web programmernavigationala Debanye ahaala denye ahaalaonline nkatanọmba ekwentịPodcastingpremiere ọdịnayaọdịnaya ọdịnayanhazi mmeghachi omumeNyocharobotsatụmatụ saịtịozi saịtịSliderobere azụmahịana-eso ụzọ bọtịnụbọtịnụ ndị na-elekọta mmadụspammkpadotestimonialselu igodovideo hostingvideosnchịkọta saịtị weebụozi webụsaịtị oziatụmatụ weebụsaịtịakwụkwọ ọcha
Nov 25, 2016 na 1:36 PM
N'okpuru ọdịnaya na atụmatụ imepụta ndị ọzọ ị ga-atụle ka m nwere ike itinye obere paragraf yana mgbọ na nọmba? Ee, ndị a bụ akụkụ nke ihe na-eme ka ọdịnaya dị ọcha ma nwee ike ịgụ ya na weebụ (isi okwu gị # 31) mana ekwenyere m na ha kwesịrị ka a kpọtụrụ ha aha na ngalaba a nke akụkọ gị.
Ọkt 25, 2017 na 11:36 AM
Emepụtara m Ndepụta Weebụsaịtị nke dị ntakịrị karịa na teknụzụ ma nwee ike inyere ndị mmepe aka mgbe ị na-emepe saịtị ọhụrụ: http://nali.org/website-checklist/
Ọkt 27, 2017 na 9:32 AM
Daalụ maka ịkekọrịta, Nick!
Nov 18, 2020 na 12:46 PM
Ihe egwu, ya mere bara uru! Daalụ